China otomatiki Njiva Nyatso Kunwa Mukombe Mugadziri uye Mutengesi | Marshine
1) Inesarudzo Pipe bracket inoita kuwedzera uye kubvisa mukombe kubva pombi nyore.
2) Hazvidiwe asi zvinokuchengetedza nguva uye kuita kuti zvinhu zvive nyore kwazvo kwauri. Kana iwe ukakwira wakananga pombi, unokanganisa system yako kana ukazombobvisa mukombe. Mabhureki anokweretesa zvakanyanya kushanduka neako system.
3) Nzira yakanaka yekudiridza huku dzako dzakura.
Huku dzinonwa kubva mumukombe, izvo zvinobvumidza huwandu hwakaringana hwemvura kuti huuye mumukombe.
Otomatiki hangaiwa munyatso mukanwa mukombe
Chigadzirwa Chigadzirwa Otomatiki hangaiwa munyatso mukanwa mukombe
Kurema 0.015kg / pc
Ruvara Dzvuku, nhema, yero
Feature Hapana inodonha, yakasimba
Kushandisa yehuku, broiler keji nezvimwewo
Kushanda huku, shiri, zvihuta, mhuka
saizi 5cm * 3.5cm4.8cm * 3.7cm
1.Chicken munyatso Kunwa Water Cup ndiyo nzira nzira kupa nguva dzose-yakachena mvura boka renyu. Seshiri painonwa, iyo-yechirimo-yakatakurirwa tebhu yakasungwa, ichiburitsa yakawanda mvura mumukombe.
2.Vanodiridza vechivanhu, kune rimwe divi, vanofanirwa kucheneswa nekuzadzwa zvekare, uye vanowanzo shatiswa.
3.Chicken munyatso Kunwa Water Cup anogona kuiswa mune divi kana pasi mugaba akadai mugomo kushandisa zvaisanganisira ichiita-chinja inokwira Hardware.
4.Kune mhinduro izere "pane zvaunoda", funga nezveKuseri Kwemapoka Ezvipfuyo Yehuku Yekudiridza Kit.
5.Mikombe yese inogona kuwedzerwa kune imwecheteyo yekudiridza system kana kupatsanurwa kuita akasiyana masisitimu Unganidza zvakananga kuPVC nemabhureki
Pashure: Otomatiki Nguruve Mvura Inonwa Kit
Zvadaro: Njiva Yemvura Inopa Mukombe
Qwail Nipple Chinwiwa Dish
Njiva Yemvura Inopa Mukombe